Puntland oo digniin u dirtay Madaxda Dowladda – Geelle Magazine
Puntland oo digniin u dirtay Madaxda Dowladda
Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad ayaa ka hadlay Mowqifka Puntland ay ka qabto dib u dhac ku yimaada qabsoomida Doorashada guud ee dalka sanadka 2021-ka, maadaama ay jiraan kiisas horleh oo la xiriira Caabuqa Coronavirus oo laga helay dalka.
Wasiir dhabancad waxa uu sheegay in doorashada Soomaaliya ay tahay arrin dastuuri ah oo waajib ku ah in ay qabtaan Madaxda Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada, isla markaana aysan ogolaan doonin in iyada oo marmarsiiyo laga dhiganayo Cudurka COVID19 in doorashada dib loo dhigo.
Waxaa uu hadalkiisa intaasi ku daray in hadii ay madaxda Dowladda ay isku dayaan in ay sameeyaan muddo kororsi ay sababi karto in dalka ay ka dhacdo xasilooni darro iyo is qab-qabsi siyaasadeed.
Ugu dambeyn Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad ayaa sheegay in xaaladda la xiriirta dhinaca Cudurka Coronavirus ee dalka ay noqota mid kasii dartey ay u baahan tahay in wadatashi laga galo sida laga yeelayo, hayeeshee aysan isku dayin in ay ka faa’iideystaan Madaxda Dowladda Federaalka.
Inta badan siyaasiyiinta Soomaalida ayaa u hanqal taagaya in dalka ay ka dhacdo doorasho, iyada oo dalku ku jiro xaalado daran oo ay ka mid tahay amni darro iyo cabdi laga qabo cudurka faafa ee Coronavirus, hayeeshee Madaxda Dowladda Federaalkana aysan siin wax jawaab ah.
Muwaadin Soomaaliyeed oo Caabuqa Corona ugu geeriyoodey Magaalada London